दलान नेपाल : April 2015
शनिवार भुकम्प आउदा मधेशी नेतृत्वहरु के गर्दै थिए ?
गएको शनिवार ११ बजेर ५६ मिनेटमा शक्तिशाली भुकम्प जादा मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु के गर्दै थिए ? तपाईहरुको जिज्ञासाको बिषय हुन सक्छ ? हाल मोर्चाको तर्फवाट सामुहिक रुपमा मुठि दान अभियान चलाउन व्यवस्त यी अध्यक्षहरु मध्ये कोही शनिवार भएकाले घरमै थिए भने, कोही अध्यक्षहरु पार्टीको बैठकमा व्यवस्त थिए । सबैलाइ चारचित पार्ने गरी आएको यो भुकम्पले सबै भन्दा वढी हैरानी सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई भएको देखिन्छ भने, अन्य अध्यक्षहरु समान्य रुपमा आम नागरिकले भोगेको परेशानी त भोग्ने नै भए ।
गएको शनिवार सदभावना पार्टीको कार्यसम्पादन समितीको बैठक चलीरहदा भुकम्प आउदा महतोलाई अली वढी परेशानी भोग्नु परेको देखिन्छ । दोस्रो दिनको बैठक सुरु भएको २५ मिनेट मै भुकम्प आयो । वानेश्वर स्थित लाखेचौर मार्गमा रहेको सदभावना पार्टीको कार्यलयमा सबै प्रमुख नेताहरु थिए । एक छिन सवै अक्ववक्व भए । पछि हतार हतार गर्दै पार्टी कार्यलयवाट सबै दौडेर निस्के । दौडेर निस्कदा महतोको खुटा मडकन पुग्यो । पार्टी कार्यलयवाट निस्केर सदभावनाका सबै नेताहरु त्यही रहेको पाठशाला स्कुलको कम्पाउन्डमा पुगे र केही डाक्टरहरुलाई त्यही वोलाएर आफनो पनि इलाज गराए र त्याहा आएका अरु धाईतेहरु को पनि । महतो ४ बजे सम्म त्यही बसे । त्यसपछि सुन्धारामा धरहारा खसेको ठाउमा पुगे । किनकी त्याहा केही वढी नै हताहती भएको सुचना आएको थियो ।
मधेशमा मुठिया दान अभियान सुरु
महाभुकम्पवाट पिडितहरुका लागी मधेशी मोर्चाले गरेको निर्णय अनुसार आज देखि मधेशका जिल्लाहरुमा मुठि दान अभियान अन्र्तगत खाद्यन्न लगायतका राहत साम्रगीहरु संकलन गर्न सुरु गरिएको छ । हिजो मात्रै मोर्चाले जिल्लागत तहमा यस्तो अभियान संचालन गर्न निर्देशन गरेका थिए । गएको सोमवार आपतकालिन रुपमा बसेको मोर्चाको बैठकले गएको शनिवार आएको महाभुकम्प वाट पिडितहरुलाई सहयोग गर्ने उदेश्यका साथ मुठि दान अभियान मधेशी भरी चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मधेशका जिल्लाहरु पर्सा, रौतहट, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरुमा आजै वाट मुठि दान अभियान संचालन गरिएको छ भने बाकी जिल्लाहरुमा भोली वाट सुरु गर्न लागीएको मधेशी पार्टीहरुका स्थानिय नेताहरुले बताएका छन । झापा, मोरड, सुनसरी, धनुषा लगायतका जिल्लाहरुमा भोली देखि यो अभियान सुरु गर्न लागीएको मोर्चा सम्बद्ध नेताहरु ले जनाएका छन । मोर्चाले काठमाडौ सहित मधेश भर रगत संकलनको लागी रक्तदान समेत गर्ने तयारीमा जुटेका छन ।
मुठिया दान अभियानका लागी मधेशी मोर्चा द्धारा जिल्लाहरु लाई निर्देशन
महाभुकम्प पिडितहरुका लागी मुठिया दान र रगत संकलन अभियान चलाउने निर्णय गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आज मधेशका सबै जिल्लाहरुलाई उक्त कामका लागी निर्देशन गरेका छन । लामो समय देखि आन्तरिक विवादका कारण बस्न नसकेको मधेशी मोर्चाको बैठक सोमवार आपतकालीन रुपमा बसेको थियो । गएको शनिवार महाभुकम्प गए पछि काठमाडौ सहित पहाडका केही जिल्लाहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन । हाल सम्म उद्धार कार्य समेत पुर्ण रुपमा हुन नसकेको यो महाविपतीवाट आउने सम्भावित खाद्यन्न संकटका लागी मुठि दान र धाईतेहरुलाई आवश्यक पर्ने रगतका लागी रगत संकलन गर्न लागीएको मधेशी मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुले जनाएका ।
महाभुकम्प पिडितका लागी मधेशी मोर्चा द्धारा मुठि दान अभियान र रगत संकलन गरिने
मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आज बसेको बैठकले हालैको महाभुकम्पवाट पिडितहरुका लागी राहत संकलन र रगत संकलन गर्ने अभियान चलाउने निर्णय गरेको । मोर्चाको बैठकले मधेशका जिल्लाहरुमा मुठि दान अन्र्तगत खाद्यन्न लगागतका साम्रगीहरु संकलन गरेर भुकम्पवाट वढी प्रभावित जिल्लाहरुमा पठाईने छ भने, रगत संकलन गरेर धाईते भएकाहरुका लागी सहयोग गरिने छ ।
३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व ओलोपालोमा हुनु पर्ने मधेशी पार्टीहरुको माग
पछिल्लो समय आन्तरिक झमेलामा फसेको एमाओवादी तथा मधेशी पार्टीहरुको ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्ने माग मधेशी दलहरुले अघि सारेको छ । गत बर्ष २६ असारमा घोषणा भए संगै यो मोर्चाको संयोजकको रुपमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रहदै आएको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा बन्द लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिए पछि प्रचण्ड संग मधेशी पार्टीहरु चिढिएका छन । लामो समय पश्चात शुक्रवार विहान बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा केही मधेशी पार्टीहरुले प्रचण्ड मात्रै सधै किन संयोजक बनिरहने भन्दै नेतृत्व आलोपालो गरी रोटोशनमा हुनु पर्ने माग गरेका थिए । पछिल्लो समयमा काग्रेस एमाले संग एमाओवादीले संघियताको सन्दर्भमा गरिएको भनिएको सहमतीलाई लिएर यी दुई शक्तिहरु विच थप दुरी वढदै गएको थियो ।
सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार आजको बैठक नेतृत्व परिर्वतनको कुरा आए पनि सम्रग सन्दर्भमा कार्यदललाई कार्य पद्धती बनाउने जिम्म दिईएको छ । कार्यदलले कार्यपद्धति र आचार संहिता बनाएर १४ गते बस्ने अर्को बैठकमा पेश गर्ने छ ।
विशेष अदालत द्धारा सिके राउतलाई सफाई
पढनुस राउतको पछिल्लो सबै घटनाक्रमहरुको समय विवरण सहित
विशेष अदालतल्े सिके राउतलाई राज्य विप्लवको मुद्धामा विहिवार सफाई दिएका छन । सरकारले दाबी गरेको अनुसार राज्य विप्लवको मुद्धामा अथेष्ट प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले राउतलाई सफाई दिएको छ । नेपाल सरकारले गएको २२ असोजमा राउत विरुद्ध विशेष अदालतमा राज्य विप्लवको मुद्धा दायर गरेका थिए । गएको भदौ २८ गते मोरड प्रहरीले राउतलाई रंगैली नजिकै एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किरहेको बेलामा पक्राउ गरेको थियो । मोरड प्रहरीले पक्राउ गरेपछि २ असोजमा उनलाई काठमाडौ ल्याएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराएका थिए । विशेष अदालतको पहिलो सुनवाईले राउतलाई ५० हजार धरौटिमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । तर राउतले धरौटि तिर्न नमाने पछि उनलाई डिल्लीवजार जेल जलान गरिएको थियो । सार्क सम्मेललाई लक्षित गरेर राउत मंसीर ८ गते धरौटि तिरेर रिहा भएका थिए । रिहा भए पछि काठमाडौ सहित मधेशका अनेकन ठाउमा उनी सभा लगायतका कार्यक्रमहरु गदै आएका थिए । जस क्रममा प्राय जसो ठाउमा प्रहरी संग दोहरो भिडन्त समेत भयो ।
राउत पक्राउ परे पछि कहिले के भयो ?
गच्छदार भन्छन - सरकारमा जान पनि सकिन्छ
at 8:58 AM Posted by Dalan
मधेशी मोर्चाका एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार काग्रेस एमाले सहमतीमा नयां संविद्यान जारी गर्ने सुनिश्चितता गरे आफु सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका छन । बुधवार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै गच्छदारले सरकारमा सहभागी हुने कुरा काग्रेस एमालेको इच्छामा निर्भर गर्ने समेत बताए । सहमतीको आधारमा जारी हुने नयां संविद्यानका लागी आफु सरकारमा जान सक्ने संकेत उनको थियो । गएको मंसीरमा मधेशी मोर्चा पुर्नजिवीत हुदा संघियता सहितको संविद्यान जारी नहुन्जेल मोर्चामा सामेल घटकहरु सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसकै लगतै एमाले अध्यक्ष केपी ओली मधेशी पार्टीहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक आग्रह गरेका थिए ।
अन्योलमा मधेशी पार्टीहरु
मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत ३० दलीय मोर्चाका नेतृत्वकर्ता एमाओवादीले काग्रेस एमाले संग मिलेर संघियता विना नै अघि वढने सकेंत दिए पछि मधेशी पार्टीहरु भित्र अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ । हुनत बन्द लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रमहरु फिर्ता भएसंगै ३० दलीय मोर्चा भित्र एमाओवादी र केही मधेशी पार्टीहरु विच खटपट सुरु भएको थियो । यो खटपटको निक्र्यौल नहुदै एमाओवादी र काग्रेस एमाले् विच संघियतालाई थाती राखेर अघि वढने सहमती भएको सामाचारहरु आए पश्चात थप अन्योलको वातावरण देखिएको छ । यद्यपी केही शिर्ष मधेशी पार्टीहरुका नेताहरुले वाहिर आए जस्तो कुनै प्रकार सहमती एमाओवादी र काग्रेस एमाले विच नभएको बताएका छन । तर उनीहरु पनि पछिल्लो समयमा मोर्चा भित्रका घटकहरु संगको विना कुनै सल्लाह नै एमाओवादी काग्रेस एमालेसंग गरेको छलफल प्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
ठाकुरले अस्विकार गर्दा यादव र महतोको छुटै मोर्चा बनाउने योजना अलपत्र
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्विकार गरिदिदा राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको छुटै मोर्चा बनाएर आन्द्योलनमा जाने योजनामा अन्योलता देखिएको छ । यही हप्ताको सुरुमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संयुक्त रुपमा ठाकुरको भक्तपुर स्थित निवास पुगेर ३० दलीय गठवन्धनवाट अलग भएर छुटै मोर्चा बनाउने र छुटै आन्दोलनको कार्यक्रमको साथ अगाडी बढन आग्रह गरेका थिए । गएको चैतमा ३० दलीय गठवन्धनले घोषीत नेपाल बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिए पछि यादव र महतोले प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै छुटै मधेशी जनजातीको मोर्चा बनाउने चेतावनी दिदै आएका छन ।
गएको विहिवार मात्रै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले सदभावनाको स्थापना दिवसमा बोल्दै मधेशका तीन ओटा पार्टीहरु सदभावना, तमलोपा र फोरम नेपाल विच छुटै मोर्चा बनाउने वारे छलफल अघि वढेको बताएका थिए । तर तमलोपा स्रोतले दलानलाई दिएको जानकारी अनुसार तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले महतो र यादवलाई प्रष्ट रुपमा आफु छुटै मोर्चा बनाएर अघि बढने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । मधेशी मोर्चामै सामेल फोरम लोकतान्त्रिक सुरु देखि नै यसको विपक्षमा आफुलाई उभ्यिाउदै आएका छन ।
२०७१ - मधेश राजनितीको अलमलमा वितेको बर्ष
विस २०७१ को सुरुमै मधेशी पार्टीहरुको नेतृत्वमा व्यापक अन्योलता थियो । जुन २०७२ मा आई पुग्दा पनि घटनु भन्दा झनै वढेको देखिन्छन । २०७० को मंसीरमा भएको दोस्रो संविद्यानसभामा नराम्ररी पराजय भोगे पछि मधेशी नेतृत्वहरु तिरमिराएका थिए, पार्टीहरुमा दोस्रो तहका र युवा पंक्तिहरु माझ रहेको व्यापक अन्तिुष्टि सतहमा आउने खतरा पलाएको थियो । त्यही भएर होला विजय गच्छदार वाहेकका मधेशी नेतृत्वहरु पार्टी एकिकरणको नाममा आफना नेता कार्यकर्तालाई भुलाई राखे भने गच्छदार केही महिनाका लागी मौन व्रत बसे ।
२०७१ को सुरुवात संगै मधेशी पार्टीहरु विच एकिकरण नहुने कुराको स्विकारोक्ति मधेशी नेतृत्वहरु वाटै हुन थाले र सुरु भयो विकल्पको खाजीमा के गर्ने भनेर । कतिपयले नभए तत्कालै मधेशी पार्टीहरु मोर्चा बनाउन पनि सुझाए तर त्यो त्यती वेलै साकारमा आएन । वरु असारको दोस्रो हप्तामा गच्छदार सहितका केही प्रमुख मधेशी पार्टीहरु र एमाओवादी विच मोर्चाबन्दीको घोषणा भयो ।
सदभावनाको २५ बर्षे नालीबेली
३ बैशाख मा सदभावना पार्टीको २५ औ बार्षीकोत्सव
सदभावना पार्टीका मुख्य संस्थापकहरु गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रा र रामचन्द्र मिश्रा
०४७ सालमा गठन हुन भन्दा पहिला नै सदभावना पार्टी सदभावना परिषदको रुपमा सक्रिय थिए । सदभावना परिषद मुख्य गरी हर्क गुरुडको रिर्पोटको विरोधमा ०४० सालमा स्थापना गरिएको थियो । रिर्पोटको कार्यन्यवयन हुन नदिने उदेश्यका साथ तत्कालिन काग्रेसमा सक्रिय नेताहरु गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तीवारी, श्यामलाल मिश्रा लगायतका नेताहरुले काग्रेस परित्याग गरेर सदभावना परिषद नामक अभियानकारी संस्थाको स्थापना गरेका थिए ।
०४६ मा प्रजातन्त्र आए संगै मधेशीहरुको नागरिकताको सवालमा काठमाडौमा विरोध रयाली गरेर चर्चा कमाएका सदभावना पार्टी पहिलो निर्वाचन ०४७ मा ६ सिट हाथ पारेका थिए । प्रतिनिधी सभाको कुल सिट २०५ मध्ये ६ सिट मा एउटा सप्तरीवाट र अरु नवलपरासी, रुपन्देही र कपिवस्तूवाट जितेका थिए सदभावनाले । सप्तरीवाट अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह जितेका थिए । त्यस लगत्तै भएको स्थानिय निर्वाचनमा सदभावना पार्टी सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयर सहित सवै पदहरु हत्याएका थिए । तर त्यस पछि भएको दोस्रो प्रतिनिधीसभाको चुनावमा सदभावनाले जम्मा ३ सिट जित हाथ पारे । कारण थियो निर्वाचन पुर्व नै सदभावना भित्र विग्रह देखियो र अन्तोगत्वा विभाजन हुन पुगे सदभावना पार्टी । विभाजनको कारण थियो सदभावनाले राष्टिय सभामा मनोनितमा पाएको १ सिटको मनोयन । तराई काग्रेसको महासचिव भएर पनि धेरै जुनियर गजेन्द्र नारायण सिंहलाई अध्यक्ष बनाएका रामजनम तिवारीलाई सिंहले अवमुल्यन गर्दै त्याहा रामेश्वर राय यादवलाई मनोनित गर्नु नै विभाजनको मुख्य कारण थियो ।
अब हामीले पनि प्रचण्डलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ - उपेन्द्र यादव
मधेशीहरुले छुटै संघर्षको वाटोमा जानै पर्छ
एमाओवादी र मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत ३० दलीय गठवन्धन ले आन्द्योलन फिर्ता लिए पछि मधेशी पार्टीहरु त्याहा वाट वाहिरिने चर्चाले यती वेला नेपालको राजनिती तातिएको छ । र यसको केन्द्रमा देखिएका छन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । यादव संग आज विहान दलानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -
तपाईहरु ३० दलीय मोर्चाको बैठक अस्ती वहिष्कार नै गनुृ भयो त ? किन ?
- होईन, हामीले ३० दलीय मोर्चाको बैठक बहिष्कार गरेका होईन । बैठकमा चाही नगएका मात्र
अनि किन बैठकमा जानु भएन त ?
- विश्वासको ठुलो संकट देखियो । जनता हामीलाई विश्वास गरेर आन्दा्लनमा होमिएको बेला एक्कासी प्रचण्डजीले आन्द्योलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर काग्रेस एमालेको अगाडी आत्मसमर्पण गर्नु भयो । यसले हामीले ठुलो अविश्वास उहां प्रति मात्रै पैदा भएको हो ।
त्यसो भए अब तपाईहरु अब के गर्नु हुन्छ ?
- प्रचण्डजीले मधेशीहरुलाई पटक पटक धोका दिदै आउनु भएकै हो । यस पटक चाही उहा आफैले म खुटा कमाउर्दिन भन्नु भयो, त्यही भएर हामी संगै अगाडी वढेका हौ । मधेशीहरुलाई आफनो वाटो थाहा छ । कसैले देखाउनु पर्दैन । अब मधेशीहरु आफनो वाटोमा अघि वढने छ ।
त्यो बाटो अब कस्तो हुने छ ?
- होईन, हामी स्पष्ट छौ । विना संघर्ष मधेशीहरु लाई याहा केही मिल्ने वाला छैन । त्यसैले हाम्रो एक मात्र वाटो संघर्षको छ ।
त्यसो भए अब ३० दलीय मोर्चा वाट वाहिरिएर मधेशी पार्टीहरुले छुटै आन्दोलन गर्छन त ?
- अहिले सवै कुरा प्रष्ट भईसकेको छैन । हामी आन्तरिक छलफलमा अहिले व्यस्त छौ । केही दिन भित्र सवै कुरा प्रष्ट हुनेछ ।
संघियताको सकसमा मधेश
at 4:03 AM Posted by Dalan
संघियताको मुद्धामा अवरुद्ध राजनिती गतिरोधको सवै भन्दा सकसपुर्ण अवस्था तराई मधेशका जिल्लाहमा देख्न पाईन्छ । सतारुढ दलहरुको संघियता सम्बन्धी अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने मधेशी पार्टीहरुको कदममा एमाओवादी मिसिए पछि यसले थप वातावरणलाई तताई दिएको छ । पछिल्लो समयमा एमाओवादी तथा मधेशी पार्टीहरुको मोर्चाले आन्दोलन स्वरुप विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरु गर्न थाले पछि त झनै मधेशमा माहौल अर्कौ देखिन्छ । तराई मधेशका जिल्लहरुमा मधेशी पार्टीहरु तथा एमाओवादी नेताहरु आन्द्योलन वाहेक अरु कुरा गर्न रुचाउदैनन भने काग्रेस एमालेका मधेशी स्थानिय नेताहरु उनीहरु कुराहरुमा मुसु मुसु मुस्कुराई रहेको देखिन्छन । पहाडी समुदायका मानिसहरु खिन्न देखिन्छन ।